Zinedine Zidane Oo Ka Warbixiyay Xaalada Kooxdiisa Kahor Kulanka Bayern Munich Ee Champions League – Gool FM
(Real Madrid) 30 Abriil 2018. Zinedine Zidane ayaa xaqiijiyay in ay diyaar u yihiin 100% labada xidig ee reer Spain Isco iyo Nacho Fernandez kulanka lugta labaad wareega afar dhamaadka tartanka Champions League ay kooxda Bayern Munich ku soo dhaweyn doonaan Santiago Bernabéu.
“Waxay si buuxda diyaar ugu yihiin kulanka Bayern Munich, laakiin waan arki doonaa hadii ay ciyaari karaan berrito ama hadii kale”.
“Waxaan dooran doonaa daafaca garabka midig ee bedelka u noqon doona Dani Carvajal, laakiin ma halis gelin doonno ciyaaryahan ku sugan halkan”.
“Waa inaan guuleysanaa kulankan, waa muhiimadeena koowaad waxaan isku dayi doonaan in xili hore aan goolal ka dhalino, waxaan kulankan soo bandhigi doonaa wax walba ee awoodeen ah”.
“Kama fikiriyo mustaqbalkeyga kooxda, kaliya waxaan ka fikirayaa kulanka soo aadan ee Champions League, waa inaan soo celinnaa shaqadii aan ku qabannay lugta hore, waa in sidaas oo kale ay dhacdaa kulanka lugta labaad”.